Kanzuru yeHarare neHurumende Vorwisa Dambudziko re Typhoid
Kubva gore rapera muna Gumiguru, vanhu vanosvika zviuru zviviri vanonzi vakabatwa nechirwere chetyphoid mumatunhu anosvika makumi mana nerimwe muHarare.
Vanhu vakawanda vava kugara vakabatira ura mumaoko vachityira kuti dambudziko rekorera remumakore a 2008 na 2009, ringangodzoka zvakare.
Chirwere che typhoid, icho chakatanga munzvimbo dze Kuwadzana ne Dzivarasekwa, chanetsa mu Harare zvekuti vanhu vazhinji vari kutyira hutano hwavo kunyange hazvo pari zvino pasati pava nemunhu afa nekuda kwekupararira kuri kuita chirwere ichi.
Vazhinji vanopomera kanzuru yeHarare mhosva yekuti havana kunge vazivisa hurumende nechimbi chimbi pakatanga dambudziko iri.
Asi kanzuru ye Harare yava kushanda nevakuru mubazi rehutano, pamwe nemasangano akazvimirira ega eUNICEF, Doctors Without Borders, nemamwe mukuedza kupedza dambudziko iri.
Mukuru anoona nezvekudzivirirwa kwezvirwere, Dr Portia Manangazira, avo vanoshanda mubazi rezvehutano, ndivo vari kutungamira chirongwa chekuti hurumende ikwanise kupedza dambudziko iri.
Dr Manangazira vanoti hurumende neguta reHarare iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi vaine chinangwa chekuti chimire kupararira.
Typhoid chirwere chinogona kupararira kunyange munhu asingazive kuti anayo zvikuru sei kana vanhu vasingaiti hutsanana hwakanaka mumabatiro avanoita chikafu.
Nyanzvi munyaya dzezvirwere zvinobata mudumbu pa Pennyslavania State University muAmerica, VaDavidson Saungweme, vanoti kanzuru yeHarare iri kurapa zvisiri izvo mukuvhara nzvimbo dzinotengeserwa chikafu dzakaita sana Mereki.
Va Saungweme vanoti nyaya huru inoda kurapwa muHarare nemaguta mazhinji munyika, inyaya yemvura yakachena kuitira kuti korera isadzoka zvakare.
Mutevedzeri wameya weHarare, Va Emmanuel Chiroto, vanoti kanzuru yavo yanga iri kutambudzika zvikuru pamusoro pedambudziko re typhoid iri asi pari zvino vava kutanga kusekerera sezvo huwandu hwevanhu vari kuenda kunzvimbo dzekurapirwa vava vashoma.
Gurukota rezvehutano, VaHenry Madzorera, vanoti kunyange hazvo bazi ravo riri kuedza neparinogona napo kurwisa chirwere ichi, basa ravo riri kudzorerwa shure nekushaikwa kwemidziyo yakasimba yekuchenesa guta, pamwe nekusakara kwaita pombi dzinofambisa mvura yesuweji.
Vazhinji vanotarisa kuhurumende nekanzuru yeHarare kuti dambudziko remvura rigadziriswe zvachose, kuitira kuti vanhu vasarambe vachinetswa nezvirwere zvinokwanisa kudzivirirwa nyore nyore.